काठमाडौं, २६ पुस । शुक्रबार धनगढी पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्धीवाला नभएको बताए र परर ताली पाए । उनले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले नेकपा सम्धी, छोरी, ज्वाइँ, भतिजा, भाइ बुहारी र सालोवाला पार्टी नभएको जिकिर गरिरहेका थिए ।
प्रचण्ड र नेपाललाई छोरी, बुहारी र सम्धीको मात्र मतलब भएको ओलीको जिकिर थियो । ‘उहाँहरुले ठूलाठूला कुरा गर्नु भएको छ। पार्टी उहाँहरुको अरे ! जसलाई छोरीको मतलब छ। जसलाई बुहारीको मतलब छ। जसलाई जनताको मतलब छैन। जसलाई आफन्तको मतलब छ। तिनको पार्टी हो कि तपाईंहरुको पार्टी हो यो ? यो पार्टी सम्धीवाला होइन, यो पार्टी छोरी–बुहारीवाला पार्टी होइन। यो पार्टी भाइ भतिजावाला पार्टी होइन। यो पार्टी तपाईंहरुको पार्टी हो। देश बनाउने पार्टी हो। यो जनताको पार्टी हो । त्यसकारण उहाँहरुले निरर्थक गफ नगरे हुन्छ ।’
उनले अगाडि थपे, ‘पहिला उहाँहरुको मन परिवर्तन गर्नुहोस् । पहिला उहाँहरुको मानसिकता परिवर्तन गर्नुहोस् । उहाँहरुका आँखा आफन्त तिर होइन देशतिर लगाउनुहोस् । देशतिर फर्काउनुहोस् । उहाँहरुका आँखा कमाउनेतिर होइन देश विकास गर्नेतर्फ लगाउनुहोस्। नत्र भने ध्यान कता छ उहाँहरुको ? छोरी, ज्वाइँ, भतिजा, भाइ, बुहारी, सम्धीसम्धीनी, आफन्त, भाञ्जो, सालो, नाती थप भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन।’
दर्शकदीर्घाबाट परर ताली बजेपछि उनले चुनौती दिँदै भने, ‘मैले कोही एउटा आफ्नो मान्छेलाई माथिल्लो अवसर दिएको भए देखाउनुस् ।’
ओलीले यस्तो भाषण गरेर वाहवाही पाइरहँदा उनकै पार्टीको दोस्रो वरियतामा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी भने तनावमा थिए । सम्भवतः ओलीको भाषण सुनिरहेको भए नेता पोखरेललाई पनि अप्ठेरो लाग्यो नै हो ।
ओलीले भाषण गरेकै केही दिनमा राष्ट्र बैंकको अध्यक्ष बन्न नपाएपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइरालाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकबाट राजीनामा दिएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिले धनीराम शर्मालाई अध्यक्ष बनाएपछि कोइरालाले राजीनामा दिएका हुन् ।
कोइरालाको राजीनामा शुक्रबार प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजीनामा पत्र आएको छ,अध्यक्ष बन्न नपाएपछि राजीनामा आएको देखिन्छ ।’
राष्ट्रिय बैंकमा ईश्वरको सम्धीले नियुक्ति पाएपछि एकपटक मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बाक्लो आलोचना भएको थियो । व्यापक आलोचनाका कारण बैंकले लामो समयसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै चुन्न सकेन । अन्ततः आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै शर्मालाई अध्यक्षमा चुनिएपछि ईश्वरका सम्धी कोइरालाले राजीनामा दिएका हुन् ।
अध्यक्ष पद खाली रहेको करिब पाँच महिनापछि गत बिहीबार बैंक सञ्चालक समिति बैठकले शर्मालाई सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत भदौ ७ मा कोइरालालाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेसँगै भोलिपल्ट उक्त निर्णयको पत्र बैंकलाई प्राप्त भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि कोइरालालाई अध्यक्ष चुन्ने प्रस्ताव तय भएको थियो । तर कोइरालाका विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि त्यो दिन बैठक नै बस्न सकेन र लामो समयसम्म बैंक अध्यक्षरहित बनेको थियो ।